कुकरमा, फसेको, बालिकाको, टाउको, डाक्टरले, पनि, निकाल्न, सकेनन्, पछि, बाध्य, भएर यसो, गरियो, ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कुकरमा, फसेको, बालिकाको, टाउको, डाक्टरले, पनि, निकाल्न, सकेनन्, पछि, बाध्य, भएर यसो, गरियो, !
भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्। घरमा भएको प्रेसर, कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो, भयो की उनले आफ्नो टाउको, कुकरमा, घुसाइन।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको, कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास, गरे। उनीहरु लगाएका अनेक जुक्ति केहिले पनि कम गरेनन्। जसपश्चात, उनीहरु बालिकालाई अस्पताल लैजान बाध्य भए। त्यहाँ डाक्टरहरुले पनि कुकरबाट बालिकाको टाउको, निकाले प्रयास, गरे। तर, उनीहरु पनि सफल हुन सकेनन्।
बालिकाको टाउको, कुकर,बाट निकाल्न, अर्थोपेडिक,देखि बाल चिकित्सा विभागका डाक्टरहरु सबैले आफ्नो-आफ्नो तरिका अपनाए, सफलता भने कसैले पनि पाउन सकेनन्। आफूहरुले नसक्ने देखेपछि उनीहरुले भाँडा पसलको मान्छेलाई बोलाएर कुकर काट्न लगाए। सावधानीपूर्वक कुकर, काटेपश्चात, मात्रै बालिकाको टाउको, निकालियो।
लकडाउनमा ५ सय ३० बोरा अवैध केराउ तस्करी गर्ने कपिलवस्तु प्रहरीको फन्दामा
एनसेलले सुरु गर्यो कोरोनाभाइरस संक्रमितको सर्वेक्षणः यसरी थाहा पाउन सकिन्छ संक्रमण भए नभएको